Barakacayaasha teedsan inta u dhexeysa Muqdisho & Afgooye oo gargaar loo dalbay – SBC
Barakacayaasha teedsan inta u dhexeysa Muqdisho & Afgooye oo gargaar loo dalbay
Ciidamada Amisom ayaa markii ugu horeysay waxay geeyeen furumaha dagaal iyo deegaanadii ay la wareegeen tiro wariye yaal ah taas oo ay ku cadeynayaan guulaha ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen xoogagii xarakada Alshabaab ee goobahaasi ku sugnaa.
Taliye ku xigeenka ciidamada Amisom oo saxaafada goobahaasi kula hadlay ayaa sheegay in qorshaha ugu weyn uu ahaa haatan in ay xaqiijiyaan wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Afhooye .
Waxa uu intaasi ku daray Taliyuhu in uu ugu baaqayo Beesha caalamka iyo Qaramada Midoobay ka qeyb qaadashada xaaladaha degaanada sida gar gaar deg deg ah oo ay soo gaarsiiyaan dadka ku tabaaleysan inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye, maadaama uu yiri amaanku iminka yahay mid la isu haleyn karo.
“In ka badan sedax boqol oo kun oo qof ayaa ku tabaaleysan deegaanada dhowaan ay la wareegeen ciidamadau waxaana ay ugaga fadhiyaan gar gaar deg deg ah beesha caalamka iyo qaramada Midoobay, waxaana ka codsaneynaa in ay la soo gaaraan gar gaar sida ugu dhaqsiyaha badan” ayaa ka mid ahaa hadaladiisa taliye ku xigeenka Amisom.
Dhanka kale Amisom ayaa sheegtay in ay jiraan qorsheyaal dagaal oo 4 jiho ah kaasi oo mid ka mid ahi ay ku guuleysteen halka sedaxda kalena ay qorsheynayaan mudooyinka soo socda in ay qaadaan kaasi oo ay ku sheegeen in uu yahay, Afgooye iyo Kismaayo, Afgooye iyo Baydhabo, iyo Afgooye iyo Baladweyn.